Home » Creative Writing » ဘဝသစ်က နောက်ကြောင်းပြန်
အရင်ဘွ မှတ်မိတယ်ဆိုပြီး ရွာထဲ အကြွေးပတ်တောင်းဦးမှပါလေ
ငြိမ်ငြိမ်မနေတဲ့ မျောက် ကိ ပေးးမယ် ပေါ့,.
တခြားး အကြွေးးတော့ မသိ…
ဒီ လူဝင်စားကတော့ 
ကျုပ်သာဦးအိပ်ရဆိုရင်. .အော်.. အေးအေး..ဆိုပြီး.. အပျိုလေးနောက်တယောက်ရတာများ.. ထပ်ယူလိုက်မယ်… လို့.. မပြောပါဘူး.. မပြောပါဘူး…။
သာဓု.. အမျှ.. ။
ဟေ့လူ ….. ပြဿနာ မရှာနဲ့နော်…….။
ဗီဒိုမင်းသမီးလေး ဖွေးဖွေးကတော့…. အနော် သင့်အေးရိပ်နဲ့…ရွှေလက်တွဲပြီး နွှဲဖို့… ကြိုးစားနေလေရဲ့
ဘာနွှဲမှာလဲ … ဗျ
နည်းနည်းထပ်ပြီး ဝင်ပွားလိုက်ဦးမယ်… ကျုပ်တို့ရွာနဲ့ နည်းနည်းလေးလှမ်းတဲ့ ရွာလေးမှာ ကျနော်နဲ့ ရွယ်တူတစ်ယောက်ရှိသဗျ… KIA စစ်သားသေလို့ ဝင်စားတာတဲ့ ထူးခြားတာက လက်ညိုးလေး ကွေးလိုက်ရင် ကလစ် …ကလစ်နဲ့ အသံမြည်သဗျ ….. သူ့အရင်ဘဝက အကြောင်းတွေလည်း မှတ်မိပြီး ပြန်ပြန်ပြောပြလေ့ရှိသပေါ့… မိုးတွေအုံ့တဲ့နေ့လိုမျိုးမှာ အတိတ်ဘဝအကြောင်းကို ပိုပိုပြီး ပြောပြချင်ပါသတဲ့လေ…..